Yenza kungasebenzi ukukhawuleziswa kwemizobo yehardware kwi-Outlook
ikhaya/imiyalelo/Yenza kungasebenzi ukukhawuleziswa kwemizobo yehardware kwi-Outlook
Vangelis20. Epreli 2021
Ukukhawuleziswa kwemizobo yeHardware kusebenze ngokuzenzekelayo kwi-Outlook. Lo msebenzi ukhawulezisa imizobo kwaye uqinisekisa ukusebenza ngakumbi kwinkqubo ye-imeyile. Ukukhawulezisa imizobo kunokubangela iingxaki kwabanye abasebenzisi. Siza kukubonisa indlela yokukhubaza eli nqaku.
1 Ukukhawuleziswa kwemizobo yeHardware
2 Umbono: Khubaza ukukhawulezisa imifanekiso yehardware
3 Indlela yoku-1: Yenza izinto zingasebenzi nge-Outlook
4 Indlela yesi-2: khubaza ukukhawuleziswa kwemizobo yehardware ngokubhalisa
Ukukhawuleziswa kwemizobo yeHardware
Die Ukukhawuleziswa kwemizobo yeHardware iqinisekisa umsebenzi okhawulezayo nolula nge-Outlook. Ngelishwa, kunokubangela iingxaki kwabanye abasebenzisi ukuba iiprofayili zithatha ixesha elide ukulayisha.
Ukulayisha iprofayili ye-Outlook kufuneka kwenziwe kwimizuzwana embalwa. Ukuba oku akunjalo, kuya kufuneka usebenzise i-Outlook Yenza kungasebenzi ukukhawulezisa.
Ukucima ukukhawulezisa imizobo kunokubangela iingxaki imbonakalo susa. Ezinye zazo zezi, ukubanda, ukungasebenzi kakuhle, ingxaki yokufaka i-Outlook, isicatshulwa esingenalusini, ukuxhoma isikhombisi ngokungacwangciswanga, njl.
Umbono: Khubaza ukukhawulezisa imifanekiso yehardware
Ukukhawuleziswa kwemizobo yeHardware kunokukhubazeka ngeendlela ezimbini. Siza kubhekisa kwezi ndlela zombini imiyalelo ukwazisa.
Indlela yoku-1: Yenza izinto zingasebenzi nge-Outlook
Qala i-Outlook kwaye ucofe ku "Ifayile> Khetha ".
Kwiwindow evuliweyo cofa ekhohlo kwi "Yandiswa".
Kwindawo engezantsi e "Intengiso" fumana ukungasebenzi kokukhawuleziswa kwemizobo yehardware.
Ukukhawuleziswa kwemizobo kuyazenzekela imbonakalo yenziwe yasebenza. Ukuba uphawula ibhokisi, ukukhawulezisa iigrafiki kuyekisiwe.
Indlela yesi-2: khubaza ukukhawuleziswa kwemizobo yehardware ngokubhalisa
Inketho yesibini, ukukhawulezisa ukukhawulezisa iigrafiki, kusetyenziswa irejista.
Cofa enye emva kwenye:
HKEY_CURRENT_USER> I-SOFTWARE> Microsoft> iOfisi> 16.0> eqhelekileyo> Imizobo
Kwifestile yasekunene cofa kabini kwiDisableHardwareAcceleration
Ngena ngaphantsi "Ixabiso" a "1", lo nto Ukukhawulezisa kungasebenzi wird.
IFirefox 70-Yenza iscrollbar kwindawo ebonakalayo yoHlaziyo lwe-urlbar
Umboniso: vala zonke iiwindows ngexesha elinye
IFirefox: Bonisa iiphasiwedi ezigciniweyo
Umbono: Ukuxhasa ii-imeyile kwikhompyuter- Iindlela ezi-2
Ukuzingela Esi sikhokelo
Qhagamshela umlawuli we-PlayStation 4 kwi-PC ngeBluetooth
Cima Windows 10 usebenzisa indlela emfutshane yedesktop
Iintengiso zeMicrosoft Edge Block Pop-up- Nantsi indlela
ukukhawulezisa Ukukhawulezisa iGraphics Ukukhawuleziswa kwemizobo yeHardware imbonakalo